HAMAFIN’NY ASAN-JIOLAHY : Hodidiana fanindroany ilay polisy voatsindrona antsy
Trobaka ny kibony, nivoaka ny tsinainy ary nisy trobaka koa ny tsinainy. Izay no nahazo ilay polisy notsindromin’ny jiolahy mpanao vola sandoka antsy ny alakamisy alina teo. 14 août 2018
Efa nodidiana izy ny alin’iny alakamisy iny ihany saingy noho ny ratra nahazo ny tsinainy dia mbola tsy afaka nohidiana tanteraka ny kibony. Araka ny nambaran’ny dokotera dia tsy maintsy averina didiana izy afaka 15 andro, ka efa sitrana ny tsinainy, hamerenana izany anaty kibony sy hanidiana azy amin’izay.
Mandra-piandry izany dia tsy maintsy mitandrina mafy izy mba tsy hidiran’ny mikraoba ny fery.
Raha tsiahivina ny zava-nitranga dia nahazo vaovao tany amin’ny tsara sitrapo izy ireo, ny alakamisy teo, ka nandeha tany Tsararano nisambotra ireo jiolahy. Efa azo ilay olon-dratsy ary nentina tamin’ny bajajy hamonjy ny kaomisaria ao amin’ny boriboritany fahatelo. Nandritra ny nisamborana azy dia nesorin’ilay jiolahy ny akanjony. Rehefa tafiditra tao amin’ny tokotanin’ny kaomisaria izy ireo dia namoaka zava-maranitra ilay jiolahy ka nanindrona tampoka ny iray tamin’ireo polisy, raha iny samy nivoaka ny bajajy iny.
Mbola nahavita nifampitolona teo izy ireo nisamborana ilay jiolahy tsy handositra. Taorian’izay dia nentina avy hatrany tany amin’ny hopitaly. Voasambotra ihany moa ity jiolahy ary azo avokoa ny fitaovana nentiny nanaovana vola sandoka sy ny taratasy fanaovany izany. Mbola nisy ihany koa vola sandoka efa vita. Efa atao famotorana izy sy ny namany hafa voasambotra niaraka taminy ka ho hita eo ny tohiny. Marihina moa fa voasazin’ny lalàna famaizana amin’ny asa anterivozona mandra maty ny mpanao vola sandoka.
Zazavavy maty natelin’ny renirano ny alahady 22 novambra lasa teo BEFOTAKA AVARATRA (326) 24 novembre 2020 Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK (169) 26 novembre 2020 Zanany sy zafikeliny ihany no nahafaty an’ilay pasitera FANAFIHANA TAO MIARINARIVO (160) 24 novembre 2020 Ben’ny tanàna teo aloha tratra anolana zazavavy tsy ampy taona ANTOBY- MIARINARIVO (114) 26 novembre 2020 Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny BEN’NY TANANA TIM (84) 24 novembre 2020 « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe LOHOLONA (82) 24 novembre 2020